‘चिनियाँ चकलेट’ले नारायणकाजी चूप !
काठमाडौं । बामपन्थी दलहरुवीच समन्वयकर्ताका रुपमा परिचित नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले आफैं किनारामा परेजस्ता देखिन्छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका शीर्ष नेतावीचको सम्बन्धमा हिउँ पर्दा यिनै नारायणकाजीले पगाल्ने गरेको उनलाई नजिकबाट जान्नेबुझ्ने नेता बताउँछन्। यी दुइ ठूला बामपन्थी दलको एकताप्रक्रियामा पर्दा पछाडिबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नारायणकाजीले छोटो समयमै पार्टीभित्रै असन्तुष्ट हुनुपरेको छ। दुइ बामपन्थी पार्टीलाई यान्त्रिक रुपमा जोड्न नेकपाका वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजीको निकै ठूलो भूमिका रहेको थियो। पार्टी एक हुनुभन्दा पहिले एमाले कित्तामा लागेको भनेर माओवादी केन्द्रमा आलोचना खेपेका नारायणकाजी पार्टी एक भइसकेपछि भने विभिन्न कारणले सन्तुष्ट हुन नसकेको देखिन्छ।
दुई पार्टीबीच एकता भइसकेपछि नेकपाले नारायणकाजीलाई पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। एकतामा खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै पार्टीले कुनै महत्वपूर्ण भूमिका देला भनेर अपेक्षा गरेका उनी प्रवक्ताको मात्रै जिम्मेवारीबाट सन्तुष्ट थिएनन् भनिन्छ। नेकपाले पार्टी एकीकरणमा भूमिका खेल्ने अर्का नेता पौडेललाई पार्टीको महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण पद दिएको छ। नारायणकाजीले आफूलाई प्रवक्ताको पद उपयुक्त नभएको भन्दै तत्कालै आफू निकटहरुसँग असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए। तर पार्टी एकीकरण नहुँदै विवाद शुरु गरेको आरोप आपूmमाथि नलागोस् भनेर मात्रै उनी मौन बसेका थिए।
सरकार र सिंगो नेकपा डा. गोविन्द केसीका मागको विरुद्धमा उभिएका बेला नारायणकाजीले पार्टीको लाईन विपरित डा. केसीका माग जायज भएको भनेर ट्वीट मात्र गरेनन्, गोविन्द केसीलाई भेट्न जाने देखि माथेमा प्रतिवेदनले उठाएका विषय समेत जायज भएको टिप्पणी गरेका थिए। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूलाई अनपढ भनेको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीसँग आगो भएका बेला नारायणकाजीले डा. केसीका माग लगायतका विषयमा सुशीला कार्कीसँग समेत भेटेका थिए। यसबाट प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा सिंगो नेकपा समेत उनीसँग झस्किएको थियो। पार्टी र सरकारको लाईन एकातिर थियो भने नारायणकाजीले आफू अनुकूल अभिव्यक्ति दिँदै भेटघाट समेत गरेर अर्कै लाईन समातेका थिए। उनी पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपाले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रम र पार्टीका अरु महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि उपस्थित भइरहेका थिएनन्। यसलाई उनले मौन वहिष्कारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको ठानिएको थियो।
नारायणकाजीको यस्तो व्यवहारले असन्तुष्ट भएका अध्यक्ष ओलीले साउन ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी र सरकारको लाईन बिपरित चलेको भन्दै उनीसँग मौखिक स्पष्टिकरण मागे। त्यही मौकामा नारायणकाजीले आक्रोश पोख्ने निर्णय गरे र प्रवक्ताको पदबाट राजिनामा गरे। त्यतिमात्र होईन उनले पार्टी र सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि पनि प्रहार गर्न थाले।
आफूले राजिनामा दिएको विषयमा नारायणकाजी खुल्न चाहेका छैनन् तर हालै एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले आफू नेताको कारिन्दा जस्तो भएर प्रवक्ता नबन्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रवक्ता पद कुनै ठूलो पद पनि नभएको भन्दै कसैले बाध्य बनाएर नभई आफ्नै राजीखुशसीमा राजिनामा दिएको बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले पनि उनी पार्टीको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
डा.केसीको अनशनका कारण सरकार समस्यामा परिरहेका बेला नेता नारायणकाजीको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट विशेष गरी पूर्व एमाले धारका नेताहरु सशंकित बनेका थिए। आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार समस्यामा परेका बेला पार्टीकै प्रवक्ताबाट सरकारको लाइन विपरित अभिव्यक्ति आएपछि एमाले धारका नेताहरुले नारायणकाजीले पार्टी र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नारायणकाजीको राजिनामाबाट तत्कालका लागि एमाले धारको नेकपामा केही राहत महसुस भएको समाचार स्रोत बताउँछ। पछि भने सरकारले नारायणकाजीकै लाइनमा गएर डा. केसीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकपछि भने नारायणकाजीले प्रवक्ताकै रुपमा सञ्चारकर्मीलाई बैठकको ब्रिफिङ्ग गरेका थिए। नेकपाले उनको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरे नगरेको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन, तर बिहीबारको बैठकमा नारायणकाजीलाई पूर्व भूमिकामै फर्काउने र उनका असन्तुष्टिका बिषयमा पनि छलफल हुने तय भएको थियो। नेकपाले उनकै नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १२ देखि १९ गतेसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्दै एक प्रतिनिधि मण्डल चीन पठाउँदै छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नारायणकाजीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल चीन जान लागेको हो। उच्चस्तरिय प्रतिनिधि मण्डलको जिम्मा दिँदै नारायणकाजीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा पठाउने लगायतका निर्णयबाट उनी केही हदसम्म खुशी भएको बताईन्छ। नेतृत्वसँग आक्रोशित नारायणकाजी नेतृत्वले अचानक उपलव्ध गराएको ‘चिनियाँ चकलेट’ पाएपछि प्रशन्न भएका हुन् कि उनको यो अल्पकालिन प्रशन्नता हो। त्यो त भविष्यमा देखिँदै जानेछ।
(तस्बिर दि काठमाडौंपोष्टबाट साभार)
२०७५ श्रावण २५ शुक्रबार ११:०४:०० मा प्रकाशित